Dagaalka Ukraine: dumarkii iyo caruurtii oo laga soo wada saaray Mariupol | Arrimaha Bulshada
Home English News News Dagaalka Ukraine: dumarkii iyo caruurtii oo laga soo wada saaray Mariupol
Dagaalka Ukraine: dumarkii iyo caruurtii oo laga soo wada saaray Mariupol
Bulsha:- Dhammaan dumarkii, caruurtii iyo dadkii da’da ahaa ayaa laga daad gureeyey warshadda birta ee magaalada Mariupol oo ay in muddo ah ku hareersanaayeen ciidanka Ruushku, sida ay soo warisay Anna Chernikova, wariyaha VOAda ee magaalada Kyiv.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, warshadda Azovstal oo xiligii Soofiyeetka ka soo hartay ayaa ahayd meeshii ugu dambeysay ee ciidanka Ukraine ay kaga hareen magaalada Mariupol. Waxay astaan u noqotay iska caabinta duullaanka ballaaran ee Ruushku doonayo inuu ku qabsado dhul ballaaran oo ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine, dagaal hadda galay toddobaadkiisii 10-aad.
Iryna Vereshchuk, kuxigeenka RW-aha ee Ukraine ayaa fariin ay qortay boggeeda Telegramka waxay ku tiri “Hawlgalka bani’aadanimimo ee qeybtan magaalada Maruiopol wuu soo idlaaday.”
Qaramada Midoobay iyo Hay’adda Laanqeyrta Cas oo hormood ka ah dadaalada badbaadada ayaanan iyagu xaqiijinin in hawlgalkii soo afjarmay.